Xildhibaan Cabdirishiid Maxamed Xiddig oo shahaadada musharaxnimada Xildhibaanimo Kismaayo ka qaatay | Arrimaha Bulshada
Home News Xildhibaan Cabdirishiid Maxamed Xiddig oo shahaadada musharaxnimada Xildhibaanimo Kismaayo ka qaatay
Xildhibaan Cabdirishiid Maxamed Xiddig oo shahaadada musharaxnimada Xildhibaanimo Kismaayo ka qaatay
Monday, February 21, 2022 News
Bulsha:- Xildhibaan Cabdirishiid Maxamed Xiddig ayaa qaatay shahaadada musharaxnimada kursiga tirsigiisu yahay 072 oo uu horey ugu fadhiyay.
Kursigan ayuu ka jirey tartan adag, waxaana horey u shaaciyay in uu u tartamayo la taliyaha doorashooyinka ee madaxweyne Farmaajo mudane Cabdi Cali Raage, oo sidoo kale horey la taliye u ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
Balse waxa ay hadda u muuqataa in Cabdi Cali Raage uusan tagin Kismaayo, islamarkaasna uusan ka mid ahayn dadka isu diiwaangaliyay musharaxnimada.
Cabdirishiid ayaa waxa haatan kursiga kula loolamaya nin aanan aad loo aqoonin oo lagu magacaabo Cabdisamad Maxamed Cabdullaahi.
Sidoo kale Cabdirishiid Xidig oo horey mar ugu tartamay kursiga guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa mar hore warbaahinta ka sheegay in kursiga xildhibaanimada uu kula loolamayo madaxweyne Farmaajo, waa sida uu hadalka u dhigaye.